Ama-Homogenizers Wokusebenza Okuphezulu - I-Hielscher Ultrasound Technology
Ama-mixer e-Ultrasonic ayithuluzi elinokwethenjelwa lokwenza homogenize, ukusabalalisa, nokuqinisa ukwakheka kopende ketshezi. Ama-homogenizers e-Ultrasonic akakhiqizi kuphela ama-emulsions opende azinzile, afanayo, kepha ama-ultrasonicators nawo asetshenziselwa ukugaya nokugaya imibala, ama-nanomaterials nezinhlayiya eziyinhloko. Ububanzi obubanzi bamakhono ama-homogenizers e-ultrasonic enza ama-ultrasonicators imishini yokuxuba eyinkimbinkimbi kunazo zonke etholakalayo.
I-Paint Homogenization, Ukuhlakazeka, kanye ne-Emulsion
I-homogenization isetshenziselwa ukunciphisa usayizi wezinhlayiyana zezinto eziqinile noma amaconsi ukuze kube lula ukukhiqizwa kwama-emulsions asezingeni eliphakeme nokusabalalisa. Ekubunjweni kopende, ukumbozwa, namavanishi, ubukhulu bezinhlayiyana obufanayo bubalulekile emiphumeleni yokufaka umbala, ukusebenza kokusebenza nokusebenza kwepende noma ukwakheka kokumboza.
I-Ultrasonic Paint Homogenizers yokuhlakazeka kanye nokwakheka kwe-Emulsion
Ama-mixers we-Ultrasonic high-shear alungele ukusetshenziswa kwe-homogenization, emulsification kanye ne-solubilization, lapho ubukhulu bezinhlayiyana noma i-droplet nokusatshalaliswa komfaniswano kubaluleke kakhulu ekusebenzeni ngopende nekhwalithi.
I-Ultrasonication ubuchwepheshe obukhethwayo be-homogenization, ngoba i-acoustic cavitation enamandla amakhulu e-ultrasound iyakwazi ukudiliza ama-molecule ngokuthembekile iye ekusabalalisweni kwezinhlayiyana ezifanayo ku-micron- naku-nano-range. I-homogenization ye-Ultrasonic inqubo eyinkimbinkimbi kunazo zonke ukukhiqiza izinhlayiya ze-nano- kanye ne-micron. Usayizi wezinhlayiya (isb. Izingulube, uwoyela, ama-wax, izithasiselo njll) zingalungiswa ngazinye ngokusebenzisa inani elifanele lokuqina kwe-ultrasonic.
Ngaphezu kwalokho, ukuhlakazeka kwe-ultrasonic kungaholela ekuguqulweni komhlaba kwezingulube okuholele ekuzinzeni okusabalalayo okwenyuka kakhulu.
zezimboni processor ultrasonic UIP16000 (16kW) ukukhiqizwa kopende nama-nanofillers
I-Ultrasonic Paint Homogenizers ye-
upende osuselwa emanzini
ukulayishwa okuphezulu kwe-pigment
Imidwebo emulsion ecwebezelayo
suspoemulsions (ingxube yokumiswa kanye ne-emulsion)
Ukuhlakazeka kwe-Ultrasonic kwamaNanofillers
Ama-filler asayizi we-nano afakwa kuzingubo ezinjengama-polymers noma izinhlaka. Ama-nanofiller anjalo angathuthukisa kakhulu izakhiwo zemishini, isb. Ukumelana ne-UV, ukumelana kokuqala, ukuqina nokuqina / ukuqina kwempahla ethile. Umehluko omkhulu phakathi kokugcwaliswa okujwayelekile kosayizi abancane be-micron kanye nabagcwalisi abancane be-nano ubukhulu obuphezulu be-surface ratio futhi ngaleyo ndlela baqedele izici ezishintshiwe zama-nanofillers. Ama-Nanomaterials (isib. Ama-nano-scale fillers) kufanele ahlakazeke ngokufanayo abe ngopende noma ukwakheka kokumboza, ukuze indawo egcwele ingasebenzisana ne-matrix yayo ezungezile. Kuphela lapho kuhlakazeka njengezinhlayiya ze-nano ezihlakazekile, ama-nanofiller angaveza izakhiwo zawo ezingavamile. Ama-homogenizers e-Ultrasonic kanye nama-dispersers ubuchwepheshe obuphambili bokuxuba ukunqanda, ukusabalalisa kanye nokusabalalisa ngokulinganayo ama-nanoparticles afana nama-nanofiller ku-matrix (isb., Ama-polymers, ama-epoxies noma ama-resins). Njengoba amandla e-shear e-ultrasonic ephula ukubopha kwe-inter-particle, zonke izinhlayiya zisakazeka zingashadile ku-matrix futhi zivula izakhiwo zayo ezigcwele. Ngaleyo ndlela, ukusabalalisa kwe-ultrasonic kanye ne-homogenization kuyindlela ethembeke kakhulu yokukhiqizwa kwezingubo zokusebenza okuphezulu.
Ukuhlakazeka kwe-Ultrasonic kweLatex Emulsion
Yize upende we-latex kungewona ukwakheka kopende okuyinkimbinkimbi kunazo zonke ukulungiselela, kusamele kulungiswe ngokucophelela futhi zonke izingxenye zokwakhiwa kwe-latex kufanele zengezwe ngokulandelana okukhethiwe. Esigabeni sokuqala sokulungiselela, ukumiswa okuyisisekelo kopende kuyalungiswa. Ngakho-ke, ama-pigment ahlakazeka emanzini ngama-wetting agents, ama-antifoaming agents nezinye izithasiselo ezidingekayo ukuthola iresiphi ethile yokwakheka. Izingulube zeTitanium dioxide (TiO2) zivame ukuhlakazeka kuqala bese kufakwa izingulube ze-extender. Kumafomula amaningi, ukuhleleka nesilinganiso sokungezwa kwalezi zinhlanganisela kuyinto ebalulekile, ethonya ikhwalithi. Kakhulu, ama-mixer anesivinini / ama-rotary mixers, okuyindlela ejwayelekile kunazo zonke ye-latex emulsification, asetshenziselwa ukumanzisa nokusabalalisa izinhlayiya. Ngama-blade noma ama-mixer ajikelezayo, ukuxubana kwefomula eyisisekelo engaguquki kungumzamo odla isikhathi. Ngemuva kwalokho, i-latex emulsion yengezwa enhlanganisweni futhi yafakwa ngezinga eliphansi kakhulu lokuxuba amandla. Ama-emulsions we-Latex athanda ukuhlangana noma aphule futhi adinga izimo ezimnene ze-homogenizing. Sekuvele kufakwa ama-thickeners asesakazekile ngaphambilini ukulungisa i-viscosity ye-emulsion yokupenda yokugcina ye-latex ekuguqukeni okufiswayo.
I-Ultrasonic disperser ingaphatha kalula nangokuthembekile ukulungiswa kwemulsions ye-latex. Njengoba amandla e-sonication futhi ngaleyo ndlela amandla okusabalalisa angahle aguqulwe abe yi-emuslification kanye ne-homogenization yezinyathelo ezahlukahlukene zokulungiselela, ukubola kwezithako noma ukuphuka kwe-latex emulsion kungavinjelwa ngokuthembekile. Ukusabalalisa kwe-Ultrasonic kuyindlela efakazelwe yokumanzi okuphelele kwe-powder. I-oda lokungezwa kwezinto, njll. Lingaguqulwa libe ngezidingo zokwakhiwa. Okokufaka kwamandla kwe-ultrasonic okulungiswe kahle kuvumela ukubonakaliswa okugcwele kombala kwemibala futhi kuphumela kupende yekhwalithi ephezulu ye-latex emulsion.
Njengoba i-disperser ye-ultrasonic ene-flow cell ivaliwe, ayikho i-aeration engadingeki noma igwebu elenzekayo. I-ultrasonicator inikeza ithuba lokuqina futhi okuthembekile, okulula futhi okuphephile ukusebenza, ngokuba nemijikelezo emifushane yeqoqo kanye nezinqubo zokwenziwa ezilula. Noma ine-ultrasonicator ebhentshini ephezulu ekusethweni kokugeleza, amandla wokukhiqiza amakhulu angasebenza futhi asebenze kahle.
Ukuhlakazeka kwe-Ultrasonic kwe-Wax Emulsions
Ama-emulsions we-wax nokusabalalisa yizithasiselo ezakhiwe ezenziwe ngezinhlayiya ze-wax ezinhle futhi ezizinzile, ezisatshalaliswa ngokufana emanzini. Lapho i-wax ihlakazeka njengamaconsi e-nano nokusatshalaliswa okufana kakhulu, kutholakala imulsions ye-wax ezinzile. Ama-homogenizers e-Ultrasonic akhiqiza amandla amakhulu we-shear futhi anezinhlelo zokuhlakazeka ezinokwethenjelwa nezinamandla zokukhiqiza i-wax nano-emulsions ezinzile.
Funda kabanzi mayelana ne-ultrasonic wax emulsification!
Isabalalisi se-Ultrasonic esinengilazi yokugeleza kwengilazi ukukhombisa ukwenziwa ngopende obomvu
I-Ultrasonic High-Shear Homogenizers yamafomula wePende
Ama-homogenizers ama-Hielscher Ultrasonics, ama-dispersers, ama-emulsifiers, kanye nezigayo kusetshenziswa ekukhiqizeni kwezimboni upende osebenza kahle kanye nokumbozwa. Ngamandla amakhulu emvamisa ye-ultrasound, ama-homogenizers e-ultrasonic enza amabutho aphezulu kakhulu we-shear, turbulences kanye namandla okubhubhisa. Lawa mabutho e-ultrasonic aqine ngokungavamile abhangqa umthelela odingekayo kuma-slurries aqinile-uketshezi ukuze ahlakaze futhi agaye izinhlayiya kusayizi ofunekayo nokusebenza.
Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kwemithwalo ephezulu eqinile
Izinhlelo ze-Ultrasonic inline zingaphatha kalula ukugxila okuqinile kakhulu. Uma nje ukulayishwa kwezinhlayiyana ze-slurry kusendaweni yokupompa futhi kungondliwa nge-ultrasonic flow-cell, ama-Hiograiz's industrial ultrasonic homogneizers angacubungula ngokwethembeka noma yiluphi uhlobo lwama-slurries a-viscous, paste-like. I-Ultrasonic wet-milling isetshenziswa kakhulu ukuze kulungiselelwe amaqoqo amakhulu ezinhlamvu zombala ezilinganiselwe nezincane. Amandla okuphatha ukulayishwa okuphezulu okuqinile okunjalo kwezinhlayiya ezikwenzayo kwenza i-ultrasonic high-shear homogenizers ubuchwepheshe bokugaya obusebenzayo nobusebenza kahle kakhulu bezingulube nezinhlayiya ze-nano-izinhlayiya.
Ultrasonic Tank Agitators kanye ne-Flow-Through Reactors
Ukwakhiwa kwe-Paint kungaxubaniswa kumathangi avulekile noma ama-batches, lapho kufakwa khona iphenyo elilodwa noma amaningi e-ultrasonic. Ukuhlanganiswa kwesiqukathi esivulekile kusetshenziswa isethaphu efana ne-Hielscher SonoStation (bona isithombe. Kwesobunxele) ukusetha okuhle ukusabalalisa imiqulu yosayizi ophakathi nendawo yokwakheka okuphakathi kuya kokuphakathi. Ngokusebenzisa ivolumu ephezulu, ukusetshenziswa okunamandla kokugaya kanye nokwephula izinhlayiya eziyinhloko kanye nama-slurries nama-pastes anama-viscous aphezulu, i-reactor ye-ultrasonic ecindezelayo ukusethwa kokuzikhethela.
Umkhumbi ovulekile onjengethangi awunakucindezelwa futhi awulungele ukucutshungulwa okufanayo kwemithamo emikhulu kanye / noma enamandla kakhulu. I-ultrasonic flow-through reactor ingacindezelwa kuze kube kubarg eziningana. Ukufaka ingcindezi ngesikhathi se-sonication kuqinisa i-acoustic cavitation futhi ngaleyo ndlela kugunde amabutho futhi kusatshalaliswe / kugaywe / kube nemiphumela ye-homogenizing ye-ultrasound. Ngasikhathi sinye, wonke upende noma ama-pigment afakwa ngokufana ku-reactor: ukuba nesikhathi esifanayo sokuhlala futhi kusetshenzwe ngaphansi kwezimo ezifanayo ze-ultrasonic, kutholakala umphumela wokuhlakazeka / wokugaya ohambisanayo. Ukwelashwa okufana kakhulu ngaphansi kwamandla amakhulu e-ultrasonic kuholela emikhiqizweni ephezulu yokupenda.
I-Hielscher Ultrasonics inikeza ububanzi obugcwele beprosesa ephezulu yokusebenza kwe-ultrasonic nge-tank kanye ne-setups setups ekuhlinzeka ngemishini ekahle yokusabalalisa ye-ultrasonic yokukhiqiza kwakho upende.
Abahlakazeki be-Ultrasonic kuwo wonke amandla womkhiqizo
Uhla lomkhiqizo we-Hielscher Ultrasonics lumboza ububanzi obugcwele bama-processor we-ultrasonic kusuka kuma-compact lab ultrasonicators ngaphezulu kwebench-top kanye nezinhlelo zokushayela kumaprosesa asezimboni asebenza ngokugcwele anamandla wokucubungula ukulayisha amaloli ngehora. Uhla oluphelele lomkhiqizo lusivumela ukuthi sikunikeze i-disperser ye-ultrasonic efaneleke kakhulu ekwakhiweni kwakho ngopende, amandla wenqubo nezinhloso zokukhiqiza.
Izinhlelo ze-Ultrasonic benchtop zilungele ukuhlolwa okungenzeka nokusebenza kwenqubo. Ukulinganiswa komugqa ngokuya ngemingcele yenqubo esungulwe kwenza kube lula kakhulu ukukhulisa amandla wokucubungula kusuka ezinkatho ezincane kuya ekukhiqizeni ngokugcwele ukuthengisa. Ukukhuphula amandla kungenziwa ngokufaka iyunithi enamandla kakhulu yokusabalalisa i-ultrasonic noma ukuhlanganisa ama-ultrasonicators amaningi ngokufana. Nge-UIP16000, i-Hielscher inikeza i-disperser ye-ultrasonic enamandla kunazo zonke emhlabeni.
Onke ama-ultrasonicators aseHielscher alawulwa kahle futhi ngaleyo ndlela enokwethenjelwa amahhashi omsebenzi ekukhiqizeni. I-amplitude ingenye yezinqubo ezibalulekile zenqubo ezithonya ukusebenza kahle nokusebenza kwe-ultrasonic ukusabalalisa nokugaya okumanzi kwe-pigment pastes, upende nama-polymers.
Zonke Hielscher Ultrasonics’ amaprosesa avumela ukumiswa okuqondile kwe-amplitude. I-Sonotrodes nezimpondo ze-booster yizinsiza ezivumela ukuguqula ubukhulu endaweni ebanzi kakhulu. Amaprosesa aseHielscher ezimboni ze-ultrasonic angaletha ama-amplitudes aphakeme kakhulu futhi ahambise amandla adingekayo e-ultrasonic wezicelo ezifunwayo. Amplitudes afika ku-200µm angaqhutshwa ngokuqhubekayo ngokuqhubekayo ekusebenzeni okungama-24/7. Ama-amplitudes aphezulu abalulekile uma kukhulunywa ngokusetshenziswa kwamandla amakhulu kwe-ultrasound njenge-nano-dispersions, nano-particle synthesis, ukugaya izinhlayiya eziyinhloko nama-mini-emulsions.
Amasethingi we-amplitude aqondile nokuqapha unomphela kwemingcele yenqubo ye-ultrasonic nge-smart software kukunikeza ithuba lokuphatha izingulube zakho nama-powder slurries ngaphansi kwezimo ezisebenza kahle kakhulu ze-ultrasonic. I-sonication efanelekile yemiphumela emihle yokusabalalisa!
Izinqubo ze-Ultrasonic zingalinganiswa ngokuphelele. Lokhu kusho ukuthi yonke imiphumela oyizuzile usebenzisa ilebhu noma ibhentshi-phezulu i-ultrasonicator, ingakalwa ngokukhishwa okufanayo kusetshenziswa amapharamitha wenqubo efanayo. Lokhu kwenza i-ultrasonication ilungele ukuhlolwa okungenakho ubungozi, ukwenziwa kwenqubo nokwenza okulandelayo kokukhiqizwa kwezentengiso. Xhumana nathi ukuze ufunde ukuthi i-sonication ingakuthuthukisa kanjani ukukhiqizwa kwakho ngopende nombala.
Njengebhizinisi eliphethwe ngumndeni neliphethwe ngumndeni, i-Hielscher ibeka phambili amazinga aphezulu ekhwalithi yamaprosesa ayo e-ultrasonic. Onke ama-ultrasonicators aklanyelwe, akhiqizwa futhi ahlolwa kahle ekomkhulu lethu lasekhaya eTeltow ngaseBerlin, eJalimane. Ukuqina nokuthembeka kwemishini ye-ultrasonic ye-Hielscher kuyenza ihhashi lomsebenzi ekukhiqizeni kwakho. Ukusebenza kwe-24/7 ngaphansi kokulayishwa okuphelele futhi ezindaweni ezifuna kakhulu kuyisici semvelo sabasabalalisi bokusebenza okuphezulu kwe-Hielscher. Lokhu kwenza imishini ye-ultrasonic ye-Hielscher ithuluzi lomsebenzi elithembekile eligcwalisa izidingo zakho zokucubungula upende.
Yini umehluko phakathi kokuhlakazeka kanye nama-Emulsions
A ukuhlakazeka uhlelo lapho izinhlayiya ezisatshalaliswa zento eyodwa zihlakazeka esigabeni esiqhubekayo senye impahla. Lezi zigaba ezimbili zingaba sezindabeni ezifanayo noma ezihlukile.
Izinhlobo ezahlukahlukene zokuhlakazeka ziyahlukaniswa. Izici ezihlukanisayo ngokwesibonelo ubukhulu bezinhlayiyana zezinhlayiya ezihlakazekile maqondana nezinhlayiya zesigaba esiqhubekayo, noma ngabe imvula iyenzeka noma cha, nokuba khona kokunyakaza kweBrownian. Ngokuvamile, ukuhlakazeka kwezinhlayiya ezinkulu ngokwanele ukuze kube nentlenga kubizwa ngokuthi ama-suspension, kanti lezo zezinhlayiya ezincane zibizwa ngama-colloids nezixazululo. I-Emulsion uhlobo oluthile lokuhlakazeka, lapho iziphuzo ezimbili ezingafakwanga (izigaba ezimbili zombuso ofanayo) zihlakazeka zodwa.
Emulsions izinhlelo zoketshezi okungenani zoketshezi ezimbili ezingafinyeleleki, lapho olunye uketshezi lusakazeka kolunye njengamaconsi amancane. Isigaba samaconsi amancane, asatshalaliswa abizwa ngokuthi ahlakazekile noma isigaba sangaphakathi, kanti esinye isigaba sibizwa ngokuthi isigaba esiqhubekayo noma sangaphandle. Kunezinhlobo ezimbili eziyinhloko ze-emulsions, ehlukaniswa phakathi: Amafutha-emanzini (i-O / W) ne-water-in-oil (W / O) emulsions. Emulsion ka-oyela-emanzini (O / W), isigaba sangaphakathi siwuketshezi oluyimbangela kawoyela noma uwoyela, kanti isigaba sangaphandle singamanzi noma uketshezi oludabukisayo lwamanzi. Emulsion yamanzi (i-W / O) emulsion, isigaba sangaphakathi siwuketshezi olufana namanzi, kanti isigaba sangaphandle singuketshezi olufana noloyela.